Waraysi: Musharaxa ugu Dhalinta yar ee Shirka Nairobi, Engineer Hussein Hassan Soyan, oo hada kusugan Nairobi
...Haddii boqolkiiba toban wax kala garanaysaa laga helo (baarlamaanka) waxaa suurogal noqonkarta iney ilaaliyaan sharciga ay umaddu dhigatey...
Su'aal Maadaama uu shirku marayo marxaladdii ugu danbeysey, Parlamaankii ladoortey in badan oo kamid ahina ay dhaarteen rajadu intee le’eg ayaad qabtaa in dawlad lahelo?
Eng. Hussein Hassan Soyan
Musharaxa madaxweynaha Soomaaliya
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Inkastoo tayada baarlamaanku aad u yartahay oo aan wada garanayno sida lagusoo xuley hadana waxaan isleeyahay hadii boqolkiiba toban wax kala garanaysaa laga helo waxaa suurogal noqonkarta iney ilaaliyaan sharciga ay umaddu dhigatey islamarkaana ay masuuliyadoodana gartaan oo aysan noqon kuwii lakala saftey markii masuuliyiintii Carte iskahoryimadeen. Markaa waxay aniga ilatahay in dawlad soo baxdaa ay kuxirantahay hadba ninka ladoorto oo hadii ladoorto qof Soomaliya lagu aaminikaro islamarkaana madaxweynaha iyo wasiirka koowaadba wada shaqeyn ka dhexdhalato in ay soo bixi karto dawlad lasii hagaajin karo, dadka iyo dalkana wax u qabata iyagoo kafaaideysanaya waaya aragnimadii ay kaqaateen dawladii carte burburkeedii waxyaabihii sababta u ahaa oo ahayd madaxweynihii iyo wasiirka koowaad oo dagaal isku qaadey iyo barlamaankii oo aan mas’uuliyadoodii kasoo bixi kadibna ay jabhadihii dal-daloolo kaheleen kana faaideysteen kalaqaybsanaantooda.
Su'aal Aragtidaada maxay kula tahay Dawladaan iyo tii carte waxay kukala duwanaan doonaan?
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Anigu dadkii carte tagey kama midaheyn haseahaatee waxay ila tahay in Shirkii carte uu ahaa mid jawiga uu ku socdey kaduwanaa kan embagati oo aad moodo in dadka shacabka ah ee shirka jooga ay iyagu wax badan u madaxbanaanayeen kaasoo aykamuuqatey in dadkii hubka watey aysan awood dheeraad ah laheyn meeshana ay kabaxsaneyd in qofkii dagaalkii sokeeye kaqaybqaatey abaalmarin looga dhigo inuu in inta kale waxdheeryahay. meesha shirkaan ajendaha uu yahay mid Igad kaliya wado oo aadan qofahaan aadan siduu u socdo aadan waxba kabadali Karin waxna kudari Karin ayna islamarkaan wixii kasoo baxa ay raad kugu yeelanyso. Hadana dadka hubka wata waxay heleen abaalmarin gooniya oo dadka kale laheyn Markaa waxaan anigu qof ahaan qabaa maadaama shirkii carte siduu kusocdey la orankaro way kayare qurxooneyd kan maanta aan u joogno hase ahaatee miriihiisii xumaadeen, hadana waxaa dhici karta in kan embagati uu ka miro fiicnaado kii carte hadii ay parlamanka ladoorto aysan ku dhicin godkii ay kii carte ku dheceen.
Su'aal: Sideed u ragtaa isqab-qabsiga baarlamaanka beelaha qaarkood dhexyaala, maxaase sababay bey kulatahay?
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Sida lawada ogsoonyahayba doorashada barlamaanka dastuurka ayaa lagu qorey qodobka 30-aad kasoo mudo badan muran ka taagnaa markii danbase lagu heshiiyey. waxayna aheyd in qabiil lagu doorto ayna soo xulaan siyaasiyiinta beesha iyo odayaal dhaqameedkuba hase ahaatee waxaad moodaa procedurkii lagu heshiiyey in aan laraaceyn oo ladhinac maray aadna arkeysid in hadba dhinac loo rogayo taasoo beelaha qaarkood lawaafajinayo kuwa kalena gacanta loogashey qolyaha hubeysan oo markaa siyasiyiinta aan hubeysneyn tixgalin lasiineyn islamarkaan aysan u madaxbanaaneyn iney wax kadoortaan parlamaanka beel ahaan loosiiyey. Taa waxay katarjumeysaa oraahda ah anigaa dadka qixiyey anigaa wax diley anigaa xukumaya anigaana qaybinaya.
Markaa anigu waxaan IGAD kula talin lahaa in beeshii sidii dastuurka kusaleysa qaybteeda laga aqbalo tii dhinac marta sidii lagu heshiiyey in xubnaha barlamaanka lagu soo xulayey laga diido ilaa ay u hogaansamaan wixii dadku ku heshiiyey. Oo procedurekii lagu heshiiyey aan laga hormarin in la raaligaliyo qof dan gaara wata ayna ogaadaan Markey sidaa sameynayaan iney qofkale xuquuqdiisii kutumanayaan sida beelo badan ku dhacdey.
Su'aal: Yaad kutalin laheyd in ladoorto?
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Waxaan ku talin lahaa in parlamaanka ladoortey ay ogaadaan in qabiil lagusoo doortey hadase markii ay dhaarteen Somali oo dhan matalaan balana ay qaadeen in ay ilaalinayaan dastuurka ay umaddu dhigatey, waxaan looga baahanyahay iney dalka iyo dakaba u adeegaan oo ay doortaan qof amaano gali kara, qaranka aan horey danbi uga galin, qaanuunka ilaalinaya kuna shaqeynaya, dagaal sokeeyana aan kaqaybqaadan markaa ninkii qoriga u qaatey dhiig somaliyeedna daadiyey si uu kugaaro dan shaqsi ah sababna u ahaa meesha maantey Soomaali taal ilaa jiritaan la’aan waxaan kutalinlahaa kaa inaan ladooran iyadoo aysuurtagal tahay in lahelikaro kuwo Somaliya lagu aaminikaro oo aan kaqeybqaadan dagaalkii sokeeye, sharciga ilaalinaya sharafna raadinaya ee aan lacag jaceyl iyo xukun jeceyl u socon ee uun raba iney taariikh fiican katagaan dadka iyo dalkana badbaadiyaan. Waana aan filayaa dadka Embagati jooga iney leeyihiin aqoon sare oo labo sano ah oo runtii kufilan iney bartaan dadka madaxtinimada raadinaya dhaqankooda iyo sidii ay u maamuleen markii la iskhilaafey iyo markii wax laqaybsanayeyba marka nimankii reerkooda kaboobey kursi barlamaan inuusan somalina wax u reebeyn.
Su'aal: Adiga 40 waad kayartahay markaa soo maragtid in aad tartanka kaharikarto?
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Runahaantii waxaad moodaa in dadka qaarkamid ah oo madasha shirka jooga ay qodobada dastuurka aysan wada akhrin waxaase jirta shuruudo farabadan oo qofka madaxweynaha noqonaya laga rabo inuu buuxiyo.; waxaa kamid ah inuusan dhiig daadin, inuusan xoolo shacabka ka dhicin, waxaa kamid ah inuu caafimaad qabo waxaa kamida inuu danbiyo waaweyn dalka iyo dadkaba ka galin makaa waxaad moodaa in lajecleystey qodobka laguhoristaagayo dadkii ay suurtagal ahaan laheyd iney isbadal keenaan laiskana indhatirayo kuwo khatartooda leh oo ay dhici karto in burbur cusub aysababaan iyo aamindarro mar kale dhexmarta umadda somaliyeed. Markaa shacabka somaliyeed waa iney fahmaan oo kaxoroobaan in loo baahanyahay qof kahormariya qabiilka aqoonta iyo wadaniyadda taasna waxaa dhaqan galinkaro dhalinyarada ama qof wayo arag ah oo xishonaya qabyaaladna aqoon.
Su'aal: Ugu danbeyntii maxaad dadka somaliyeed oo wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba jooga kula talin laheyd?
Jawaab Eng Xuseen Xasan Sooyaan Waxaan dadka somaliyeed u lasocodsiinayaa ineyogaadaan meelkastooy joogaanba in Beel kasta ay ogaatey iney dawlad u baahantahay aysana jirin beel qabiil kumideysan oo beel waliba isasoo dishey aysana jirin beel dawladii nagaburburtey karaysatey ee mid walba ay kaqaylineyso kan hortaagan oo aysan codna ku dooran kuna tuuri Karin. Waxaa kaloo jirta in shirku qabil kusocdo dadka sharaxana qaarkood qabiil kuxisaabtamayo ayse dhici karto beeshii qof umaddu aaminikarto keenta oo aqoonta kahormarinaya qabiilka wadaniyadna leh ay u sahlanaan doonto iney ku guuleysato tartanka madaxnimada, sidaa darteed waxaan kutalin lahaa in ay taageeraan wixii shirka kasoo baxa oo ay saxaan wixii khaldan si looga baxo jiritaanla’aanta maantey nahaysata.
Presidential Candidate for Somalia
Faafin: SomaliTalk.com | August 29, 2004
Khilaafkii Beelahii ka Dhimanaa Baarlamaanka oo La soo Afjaray
Waxaa la sheegay in la dhaarin doono... Guji